I-Autotroph - Wikipedia
Amagqabi aluhlaza (lo mbala uluhlaza uvela kwi-chlorophylll) omthi we- fern: oxhonti buboya: i-photoautotroph
Uhlobo lwetshathi edweliswe emakwaziwe nge-Autotroph
I-autotroph (igama livela kwigama leGrike elithi autos = oko kuthetha ukuthi self aze yena u-trophe = athethe ukuthi nutrition) luhlobo lwe-organism (isidalwa esiphilayo) esikwaziyo ukuzenzela ii-organic compounds (Ukutya) kwii-molecules.
Imisebenzi yazo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Ii-Autotrophs zifuneka kuzo zonke iintlobo zokutya ezikuluhlu lwe-chain yokutya, kuyo yonke i-ecosystems. Zilanda i-energy kwi-environment (Ilanga okanye i-inorganic sources) zize ziyisebenzise ukuze zenze ezinye ii-organic molecules ezisetyenziselwa ukuba zenze imisebenzi ngemisebenzi yakwa-biology efana nokukhuliswa kwe-cell okanye ukulungiswa kwe-tissue eyaphukileyo.
Intlobo-ntlobo zazo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Izityalo nezinye izinto eziphilayo ezikwaziyo ukusebenzisa i-photosynthesis zibizwa ngokuba zii-phototrophs (okanye ii-photoautotrophs). Ii-bacteria ezisebenzisa ii-inorganic compounds ezifana ne-hydrogen sulfide, i-phosphorus okanye i-iron zibizwa ngokuba zii-chemoautotrophs. Ezinye ii-organisms, ezibizwa ngokuba zii-heterotrophs, zitya ii-autotrophs.
Kukho nezinye ii-species eziphila ngokutya ii-organic compounds, kodwa zibe zinakho ukusebenzisa ukukhanya njengendawo apho zifumana khona i-energy. ezi ke azikho-autotrophic, kodwa zona zi-heterotrophic. I- mixotroph yi-(micro)organism enokusebenzisa umxube we-energy ne-carbon ezimthombo wazo ukwindawo ngeendawo.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-13 Eye Dwarha 2016, kwi-10:54